Intel ichagadzira yakazara homomorphic encryption chip | Linux Vakapindwa muropa
Intel yakazivisa kuti yapinda US Defense Yekutsvagisa Yekutsvagisa Zvirongwa Agency. (DARPA) sechikamu chechirongwa chayo cheDPRIVE (Dziviriro yeData munzvimbo dzakapoteredza) yekuvandudza chip izvo zvinobvumidza maapplication kushanda nedhivhodhi data pasina kuibvisa pakutanga.
Chip inoshandisa pop-up yekumhanyisa nzira inozivikanwa seyakazara homomorphic encryption (FHE) kufambisa kuita uku. Iyo purojekiti, yakaziviswa seyakawanda-gore, ichasanganisirawo Microsoft, iyo inobatsira nekuvandudza.
Kuchengetedzwa kwedata ndechimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo mune ramangwana reIT. Iyo vhoriyamu yedata yakavanzika inoramba ichikura, sezvinoita kukosha kwayo uye huwandu hwezvidziviriro zviri pamutemo zvinodiwa Izvi zvinoita kuti chero kugadziriswa kwemunhu, zvakavanzika uye zvakavanzika dhata zviome, kazhinji zvichikonzeresa kugadzirwa kweakatsaurwa dhata silos, sezvo kugadziriswa kwese kuchida kufambiswa kwedata pamwe necryption / decryption, zvinoreva kuvimba kusingawanzo kuitika.
Mukambani, itsika kunyorera data zvese pazvinochengetwa uye kana vachipfuura nemambure. Encryption inogona kudzivirira vabeki kubva pakuverenga marekodhi kana vakawanikwa kuburikidza nekutyora.
Iyo isina kusimba poindi ndeyekuti iyo yakavharirwa dhata inofanirwa kubviswa nemashandisirwo Vanoshandisa ivo vasati vagona kuita chero kuverenga. Izvi zvinopa vanobiridzira, uye kunyangwe avo vanoshanda nedata, iko kugona kuwana ruzivo rwakavanzika uku uchiruchengeta mumhando inoverengwa.
"Tinofara kuve takasarudzwa semubatsiri wehunyanzvi neDARPA uye tinotarisira kushanda navo neMicrosoft kusimudzira chitsauko chinotevera mukuvanzika kwekomputa uye kuvhura vimbiso yekunyorwa kwenyaya kune vese," chiziviso chemugadziri chinoverenga.
FHE inzira yekuchengetedza data izvo zvinopa humbowo hwemasvomhu hwekunyorera nekrisptographic nzira, izvo zvinoenderana neDARPA zvinogona kupa nhanho nyowani yechokwadi nezvekuti data rinochengetwa nekubatwa sei. Izvi zvinogadzirisa matambudziko asingabvumirwe ekuwana.
"Nhasi, kunyorerwa kwechinyakare kunochengetedza data apo rinenge richichengetwa kana kufambiswa, asi ruzivo rwunofanirwa kubviswa kuti ruite kuverenga, kuiongorora kana kuishandisa kudzidzisa muchina wekudzidza muchina," akatsanangura.
Kuchekesa kunoisa data panjodzi, kuchiifumura kuti ikanganise kubva kune vadzivisi vane hunyanzvi kana kunyangwe kubuda kwetsaona. FHE inobvumira kuverenga kwemashoko akavharidzirwa, zvichibvumira vashandisi kuti vawane chiyero pakati pekushandisa dhepfenyuro yakazara uye nekubvisa njodzi yekubuda pachena ".
Kunyangwe iyo FHE ichionekwa semhinduro inoshanda, inoda simba rinorambidzwa remakomputa uye nguva yekomputa. "Kuverenga kunotora mamillisecond pane yakajairwa laptop kunotora mavhiki pane yakajairwa server inomhanya FHE nhasi," akadaro Tom Rondeau, director wechirongwa cheDARPA.
Intel kugadzira chip inovavarira kumhanyisa nzira dzeFHE kunyorera Kuti uite iyo FHE iwe unogona kuwedzera saizi yedata kubva ku100 kusvika ku1000 nguva, uye kuverenga kweiyo data ipapo 10,000 kusvika 1 miriyoni nguva inononoka pane yakajairwa kuverenga. Kugadzirisa dambudziko iri, DARPA yakatanga chirongwa cheDPRIVE kudzikisa nguva yekugadzirisa kubva kumavhiki kusvika kumasekondi.
Intel yakasaina chibvumirano neDARPA uye iro basa richava rekugadzira application-yakatarwa IC yekumhanyisa kudzikisira mashandiro epamusoro parizvino inosanganisirwa yakazara homomorphic encryption.
Pamusoro pezvo, zvikwata zviri kutsvaga nzira nyowani dzekuchengetedza ndangariro, inoshanduka dhizaini dhizaini uye mamodheru epurogiramu, pamwe nenzira dzekumisikidza dzakatarwa kuona kuti kuitiswa kweFHE kuri kwakarongeka nekugadzira uye kunopa kuvimba kwevashandisi, akadaro DARPA.
Iyo FHE haisi nyowani kuIntel, iyo ine timu yekutsvaga mukati meIntel Labs yakatsaurirwa kuchinyorwa. Chikwata ichi chakanyanya kutarisana nesoftware, zviyero, uye zvipingamupinyi zvemitemo, asi izvozvi zvichatarisa dhizaini yedhizaini, software inomhanya mugore, uye kubatirana kwekubatira paMicrosoft Azure neJEDI kuhurumende yeUS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel yekugadzira yakazara homomorphic encryption chip
Linus Torvalds inokurudzira vashandisi kuti vasashandise RC1 vhezheni yeLinux 5.12